Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bulgaria War Deg Deg Ah » 45 qof ayaa ku dhimatay shil bas oo ka dhacay Bulgaria
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Bulgaria War Deg Deg Ah • Safarka Ganacsiga • Wararka Dowladda • News • Dadka • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Sida laga soo xigtay warbaahinta Bulgaria, dhammaan rakaabkii 50-ka ahaa waxay u dhasheen Albania, halka labada darawalba ay wateen baasaboorka Waqooyiga Macedonia.
Baska dalxiiska oo wata taarikoda Waqooyiga Macedonia ayaa shil galay oo ku dhacay galbeedka Bulgaria jid weyn.
Baska, oo ka diiwaan gashan Waqooyiga Macedonia, ayaa ka soo safray Istanbul kuna socday Skopje.
Sida laga soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha Bulgaria, Nikolai Nikolov, ugu yaraan 45 qof oo ay ku jiraan dhowr carruur ah, ayaa ku dhintay shilkan naxdinta leh ee dhacay subaxnimadii hore ee Talaadada, abaare 2-dii subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah.
46 caruur ah ayaa ku dhintay shilkaasi sida ay sheegtay warbaahinta Bulgaariya. Warar kale ayaa sheegaya in XNUMX qof ay ku dhinteen.
Tiro yar oo ka badbaaday oo qaarkood ay aad u gubteen ayaa loo qaaday isbitaal ku yaalla caasimadda Bulgaria ee Sofia.
Maya Argirova, oo ah madaxa qeybta gubashada isbitaalka, ayaa sheegtay in qaar ka mid ah dhibanayaasha ay ku dhaawacmeen iyagoo ka boodaya daaqadaha xilli ay isku dayeen inay ka baxsadaan baska.
Ilaa hadda lama garanayo sababta keentay burburka diyaaradda.
Waxaa baska saarnaa 52 qof. Sida laga soo xigtay warbaahinta Bulgaria, dhammaan rakaabkii 50-ka ahaa waxay u dhasheen Albania, halka labada darawalba ay wateen baasaboorka Waqooyiga Macedonia.
BulgariaWasiirka arrimaha gudaha Boyko Rashkov ayaa sheegay in musiibadan "naxdin leh" la baari doono.